JexMozika Info. About. What's This?
Jex Mozika dia mpamorona, mpiangaly sy mpandrindra mozika ary mpihira. Natao ho an’ny sahalan-taona rehetra ny hirany. Hajaina RAVOAJA no tena anarany, mpikambana tao amin’ny tarika Tohy izy ny taona 1997 ka hatramin’ny taona 2001. Taorianizay izy dia nanao rap tao anatina tarika maro sy irery. Jex Ambiroa no anarany taminizany. Rehefa hitany ny lalana tiany ikopahana elatra dia nanomboka namoron-kira aminny gadony manokana izy. Nanomboka taminny taona 2003 izy no namorona hira aminny gadonny mozikanny fanahy na Soul fa aminny fomba fanaony manokana. Hajaina Jex indray no anarany taminizany. Hitany fa afaka ampifanarahana aminny kolontsaina malagasy io gadona io. Izy rahateo dia miangola rehefa mihira, araka ny fomba maha izy azy anAntananarivo na Iarivo. Izany no nampisokatra ny sainy hampiharo ny ba gasy sy ny gadona maro izay ankafiziny sy mora ahitany aingam-panahy. Hajaina dia mpikambana sy mpihira fasiny amin’ny tarika Nada Miangola sy Riantsara. Ny reniny no anisan’ny namorona ireo tarika ireo. Ankehitriny dia Jex Mozika no anarany satria noho ny vokatry ny fikarohany dia mbola nahita endrika vaovao indray izy ara-mozika. Ankoatrizay dia azo lazaina fa niavaka ny mozikani Jex satria mbola tsy nisy nanao toy izany fampifangaroana izany. Ny mampiavaka azy koa dia ny tsy fitadiavany laza sy ny fanaovany mozika tsy ara-barotra fa manaja ny fahafenoany. Ity ny rohinny tranonkalany:
Ireto ny raki-peony:
Vatana sy Fanahy
1- Kabary an-kira 2- Ao ve? 3- Teny ierana 4- Miankìna amiko 5- Tovovavin’Iarivo 6- Maso menatra 7- Isaorako 8- Mandalo izany 9- Aza mba manao ratsy 10- Ny olombelona 11- Matsom-panahy 12- Ny tsiron’ny tany
1- Tia anay 2- Malagasy feat IsaRoaTelo 3- Ny Ranomaintiko 4- Olon’ny fanahy 5- Mangina 6- Tsy mety mangatsiaka 7- Tsy mandao 8- Antson’ny foko 9- When I think of you 10- Mandrahona ahy ny maizina Hira Fifohazana